Ngizama ukujabulisa ingane yami encane ngokudlala umculo we-Moon & Me ku-kalimba njengoba kwenza u-Moon Baby, kodwa angiwatholi amanothi noma kuphi. Sine-kalimba yokhiye abangu-8 (ngoba ibukeka njenge-Moon Baby - izinto esizenzela abantu abancane!)
Ukhona ongasiza? Umculo usekuqaleni kombukiso, bese kuba ngo-1:30, 4:00 nango-20:15 kule vidiyo. Siyabonga kusengaphambili nganoma yiluphi usizo/iseluleko.
Lesi sihloko sashintshwe izinyanga ezingu-8 ezedlule I-ChelleGC
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 18/09/2021 11:44 am
Latest Post: I-Poll - Flat board noma i-Resonance box? ilungu lethu entsha: oliviacockerill Okuthunyelwe kwakamuva Okungafundiwe Okuthunyelwe Amathegi